Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 15
Nepali New Revised Version, Ezekiel 15
2 “हे मानिसको छोरो, दाखका बोटको काठ वनका अरू कुनै रूखहरूको हाँगाभन्‍दा असल छ र?
3 के केही चीज बनाउन त्‍यसबाट काठ कहिल्‍यै निकालिन्‍छ र? के मानिसहरूले कुनै थोक झुण्‍ड्याउनलाई त्‍यसबाट कीला बनाउँछन्‌ र?
4 अनि त्‍यो त दाउराको लागि आगोमा हालेपछि, र त्‍यसका दुई छेउ आगोले भस्‍म भएर र त्‍यसको बीचको भाग कोइला भएपछि, के त्‍यो कुनै कामको हुन्‍छ र?
5 यदि त्‍यो सिङ्गै हुँदा पनि केही कामको थिएन भने, आगोले भस्‍म भएर कोइला भएपछि त्‍यो झन्‌ के कामको योग्‍य हुन्‍छ र?
6 “यसकारण परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ, जसरी वनका रूखहरूमध्‍ये दाखका बोटको काम मैले आगोको लागि दाउरा हुनलाई दिएँ, त्‍यसै गरी म यरूशलेमका मानिसहरूसित पनि व्‍यवहार गर्नेछु।
7 म मेरो अनुहार तिनीहरूका विरुद्धमा उतातिर फर्काउनेछु। तिनीहरू आगोबाट उम्‍के तापनि तिनीहरूलाई आगोले नै भस्‍म गर्नेछ। जब म मेरो अनुहार तिनीहरूका विरुद्धमा फर्काउनेछु, तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछौ।
8 तिनीहरूले विश्‍वासघात गरेका हुनाले म तिनीहरूको देशलाई उजाड़ पार्नेछु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।”
Ezekiel 14 Choose Book & Chapter Ezekiel 16